Shikhar Samachar | दरबार हत्याकाण्डको १९ वर्ष पूरा : श्रुति जीवितै थिइन् ! दरबार हत्याकाण्डको १९ वर्ष पूरा : श्रुति जीवितै थिइन् !
दरबार हत्याकाण्डको १९ वर्ष पूरा : श्रुति जीवितै थिइन् !
प्रकाशित मिती: २०७७ जेष्ठ १९
राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गर्ने गरी मच्चाइएको दरबार हत्याकाण्डको १९ वर्ष पूरा भएको छ । १९ वर्षको यस अवधिमा अनेकन व्यक्ति सत्तामा पुगे तर राजा वीरेन्द्रको परिवारको समूल नष्ट गर्ने गरी मच्चाइएको हत्याकाण्डको चित्तबुझ्दो कारण अहिलेसम्म पनि जनताले पाएका छैनन् ।
२०५८ साल जेठ १९ गते शुक्रवारको रात्रि राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, नवयुवराज निराजन, अधिराजकुमारी श्रुतिसहितका १० जनाका लागि कठोर काल बनेर निम्तिएको थियो । घटनामा राजा वीरेन्द्रका कान्छा भाइ धीरेन्द्र शाह, राजपरिवारका सदस्यहरु शान्ति, श्रद्धा, जयन्ती र श्रद्धाका पति कुमार खड्गविक्रम शाहलाई गोली हानेर मारिएको थियो ।
नेपालको इतिहासकै कालो दिनका रुपमा अंकित जेठ १९ मा भएको घटनाबारे अझै पनि नेपालीको मन सन्तुष्ट हुने गरी तथ्य स्थापित भएको छैन । हुनत, राजा वीरेन्द्रका सहोदर भाई ज्ञानेन्द्र स्वयं हत्याकाण्डपछि राजा बने । तर मानिसलाई पत्यार लाग्ने गरी उनले पनि घटनाको छानबीन गराउन सकेनन् ।
सर्वोच्च अदालतका तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा सभामुख तारानाथ रानाभाट सदस्य रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रेमवियोगमा परेका युवराज दीपेन्द्रबाट हत्याकाण्ड मच्चाइएको प्रतिवेदन त दियो तर उक्त प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्म पनि मानिसले पत्याउन सकेका छैनन् ।
ज्ञानेन्द्रबाहेक नै पनि यो कालखण्डमा दर्जनौं व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेर सत्ता सम्हाले तर कसैले पनि यस हत्याकाण्डको उचित छानबिन गराएनन् । वीरेन्द्रको वंशनाश भएको नारायणहीटी दरबारको प्रांगणमा उभिएर इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो हत्याकाण्डको तथ्य सार्वजनिक गर्ने आश्वासन प्रत्येकजसो शासकले दिए । तर दण्डहीनताको जालोमा लपेटिएको नेपाली सत्ताले यो घटनालाई पनि उसैगरी छाडिदियो जसरी अरु सयकडौं घटनाहरु न्याय नपाएरै इतिहासको गर्भमा विलुप्त भए ।
दरबार हत्या काण्डका विषयमा थुप्रै पुस्तकहरु बजारमा आएका छन् । तत्कालीन राजा, रानी र युवराजको पाश्र्ववर्तीका रूपमा १७ वर्ष दरबारमा बिताएका सुन्दरप्रताप रानाले पनि गतवर्ष ‘दरबारको दुःखान्त’ नामक पुस्तक बजारमा ल्याएका छन् ।
उनले आफ्नो पुस्तकमार्फत दरबार हत्याकाण्डको बेला के के भएको थियो ? आफ्नो आँखाले के के देखे ? त्यसको सविस्तार वर्णन गरेका छन् । उनले पुस्तकमा हत्याकाण्ड हुँदा तत्कालिन राजकुमारी श्रुति जिवितै रहेको पनि खुलासा गरेका छन् ।
दरबार हत्याकाण्डमा गोली चल्दै गर्दा नारायणहिटीमा प्रवेश गर्ने शाही पाश्र्ववर्ती (एडिसी) सुन्दरप्रताप रानाले १८ वर्षपछि लेखेको यो पुस्तकले दरबार हत्याकाण्डका थुप्रै पाटाहरु उजागर गरेको दाबी गरिएको छ ।
त्रिभुवन सदनभित्र पस्दा मान्छे पूरै सोत्तर थिए, रगतको खोलो थियो
शाही पाश्र्ववर्ती (एडिसी) रानाले पुस्तकमा लेखेका छन्- स्वचालित हतियार नियन्त्रण गर्न स्वचालित हतियारै चाहिन्थ्यो । तर, गजेन्द्र (दीपेन्द्रका एडिसी)ले अटोमेटिक हतियार ल्याउलान् भनेर पर्खिरहने समय थिएन, म आफ्नो ‘होल्स्टर’मा रहेको पिस्तोल निकाल्दै बिलियर्ड हलतिर दगुरिहालेँ ।
दगुर्दै जाँदा झ्यालबाट मेरा आँखा हलभित्र सरर्र पुगे, मान्छे पूरै सोत्तर भएर लडेको देखेँ । बिलियर्ड टेबलनजिक वीरेन्द्र सरकारको शरीर समातेर पूर्वअधिराजकुमार धीरेन्द्रका ज्वाइँ डा. राजीव शाही बस्नुभएको थियो । त्यहाँ छिर्ने एउटै मात्र ढोका पूर्वतिर थियो, प्यासेजपट्टि अलिकति घुमेर जानुपर्थ्याे ।
म दगुर्दै भित्र पुग्दा केही क्षणअघि मात्र देखिएका डा. शाही त्यहाँ हुनुहुन्नथ्यो । त्यसवेला हलको बाहिरपट्टि गोली चल्दै थियो । हलभित्र पुग्दा भएभरका मानिस भुइँमा लडेका देखेँ । त्यो रगताम्मे माहोलमा सुरुमा त तिरिमिरी भयो । तर, तत्कालै आफूलाई सम्हालेँ । को–को लडे र कसलाई के–के भयो भनेर सोच्ने–हेर्ने समय थिएन । एक–एक सेकेन्डको महत्व थियो ।
मेरो ध्यान महाराजाधिराजतिर मात्र केन्द्रित थियो । लडेका मानिसलाई नाघ्दै म सरकार भएको ठाउँमा पुगेँ । सरकारलाई गोली लागेको प्रस्ट भइसकेको थियो । बिलियर्ड टेबलनजिक भुइँमा ढलेका राजालाई कसरी बाहिर निकाल्ने र अस्पताल लैजाने भन्ने कुरा मेरा लागि मुख्य चुनौती बन्यो ।
श्रुति जीवितै थिइन्
सैनिक अस्पतालमा मेरोनजिक आएर शाहज्यादा पारसबाट सोधनी भयो, ‘सुन्दर, ह्वाट इज द सिचुएसन हियर राइट नाउ ? प्लिज ब्रिफ ह्वाट इज ह्यापेनिङ ?’ त्यहाँ उपलब्ध राजपरिवारका सदस्यमध्ये सबभन्दा वरिष्ठ मैले पारसलाई मात्र देखेँ । के भइरहेको छ भनेर सोधेपछि मैले आफ्नो पेसागत कर्तव्यअनुरूप जवाफ दिनुपर्थ्याे, त्यसवेलासम्मका सबै विवरण बताइदिएँ ।
नाजुक दिपेन्द्र/तयार ज्ञानेन्द्र
२०७७ जेष्ठ १९